Crown Online Education Fair 2020 Archives - Crown Education
Category: Crown Online Education Fair 2020
Posted on: May 30 ,2020
[CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020, June 6, 7] Registration: bit.ly/crownfair ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဘာသာရပ်သင်ယူမယ့်ကျောင်းသား/သူတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်ယူတော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိရေး၊ စာသင်စရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ဘွဲ့ဒီဂရီရယူနိုင်ရေး၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံရရှိဖို့သာမက ပညာသင်ဆုတွေနဲ့ သက်သက်သာသာသင်ကြားနိုင်ရေးစတဲ့အချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ . CROWN ...
[CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020, June 6, 7] Registration: bit.ly/crownfair ❑ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားလိုသူတိုင်း သိရှိပြင်ဆင်ထားသင့်သည့်အချက်များ... . ❑ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်/GCE O’Level ရမှတ်ဖြင့် Stamford Universityတွင်လျှောက်ထားနိုင်မည့် ဘွဲ့ကြို ဘာသာရပ်များအတွက် ...
[CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020, June 6, 7] Registration: bit.ly/crownfair လက်ရှိမှာ (၂ဝ၂ဝ/၂ဝ၂၁)အတွက် ရည်မှန်းထားတဲ့ ပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေ ရပ်တန့်သွားနိုင်မလား... နှောင့်နှေးသွားနိုင်မလားလို့ … စိတ်ပူပန်နေတဲ့ မိဘ/အုပ်ထိန်းသူတွေနဲ့ ကျောင်းသား/သူတွေ... ...
Posted on: May 21 ,2020
[CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020, June 6, 7] Registration: bit.ly/crownfair . ➡️ အင်္ဂလန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကကျောင်းသား/သူတွေ (၈၀%)လောက် သွားရောက်ပညာသင်ကြားဖို့အတွက် ရွေးချယ်ကြတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတက္ကသိုလ်ကြီးတွေရှိတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ကျောင်းသွားတက်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီး ပညာသင်ဆုလဲ ...
[CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020, June 6, 7] Registration: bit.ly/crownfair . ❒ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်လေ့လာသင်ယူဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် 2020 Aprilလကစပြီး ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်၊ ဥယျာဉ်သုံးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်နဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တွေကို စနစ်တကျကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ ...
Registration: bit.ly/crownfair [CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020, June 6, 7] . ➡️ အင်္ဂလန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကကျောင်းသား/သူတွေ (၈၀%)လောက် သွားရောက်ပညာသင်ကြားဖို့အတွက် ရွေးချယ်ကြတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတက္ကသိုလ်ကြီးတွေရှိတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ကျောင်းသွားတက်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီး ပညာသင်ဆုလဲ ...
Registration: bit.ly/crownfair [CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020, June 6, 7] ✅ Fulbright Scholarsအများဆုံးမွေးထုတ်ပေးထားသော ✅ ကျောင်းလခလည်း သက်သာသော ✅ နှစ်စဉ်ပညာသင်ဆုများလည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးလေ့ရှိသော ✅ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရှိ စတုတ္ထအကြီးဆုံး ပြည်သူပိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်သော ✅ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များ၏ Top 5%တွင်ပါဝင်သော University of South ...
Posted on: May 18 ,2020
Registration: bit.ly/crownfair “ယူအက်စ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးResearch & Public တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့Colorado State Universityမှာ USD 40,000ပညာသင်ဆုနဲ့ သင်ကြားခွင့်ရယူပါ….” ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ...
Registration: bit.ly/crownfair [CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020, June 6, 7] ✅ Canada မှာကျောင်းသွားတက်ချင်တယ်! ✅ စီးပွားရေးဘာသာရပ်ကို လေ့လာချင်တာ! ✅ Scholarship လေးလည်း လိုချင်တယ်! ကျောင်းစာသင်စရိတ်အများကြီး မသုံးချင်ဘူး! ✅ ကျောင်းပြီးရင် အဲ့နိုင်ငံမှာပဲ အလုပ်ဆက်လုပ်ချင်တာ! ✅ IELTS/ TOEFLတွေလည်း ဖြေထားတာမရှိသေးဘူး! ✅ လက်ရှိ Canada ...
Posted on: May 17 ,2020
"Russell Groupအဖွဲ့ဝင် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ University of Sheffieldမှာသင်ကြားလိုပါသလား..." ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ...